63 – ဦးသောင်းညွန့် (သတင်းထောက်သောင်းညွန့်-ဖျာပုံ) | Lumyo Chit
63 – ဦးသောင်းညွန့် (သတင်းထောက်သောင်းညွန့်-ဖျာပုံ)
အဖ ဦးတင်မောင်၊ အမိဒေါ်စိန်တို့မှ ၁၉၄၈-ခုနှစ် မတ်လ(၅)ရက်နေ့တွင် အမှတ်-၁၀၈၊ ၁၁-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက် ဖျာပုံမြို့၌ မွေးဖွားသည်။ ဖျာပုံမြို့ အ.ထ.က(၃)တွင် အထက်တန်းအတိ ပညာသင်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၆၆-ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်သတင်းစာ၊ မြန်မာ့သတင်းစာ၊ ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာ၊ ကြေးမုံသတင်းစာ၊ ဂါဒီယန်သတင်းစာများနှင့် သတင်းဂျာနယ်တို့၌ သတင်းနှင့် သတင်းဆောင်းပါးများ စတင်ရေးသားပြီး စာပေနယ်သို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်မှာ (၁၄/ဖပန(နိုင်)၀၆၁၉၈၈)ဖြစ်ပြီး စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်အမှတ်-၀၁၇၆ ဖြစ်သည်။
၂၀၀၃-ခုနှစ်အတွက် စာပေဗိမာန် စာမူပြိုင်ပွဲတွင် “အမျိုးသမီးများသိမှတ်ဖွယ်ရာ ဥပဒေရေးရာ”စာမူဖြင့် သုတပဒေသာ(၀ိဇ္ဖာပညာရပ်) ပထမဆု၊ ၂၀၀၄-ခုနှစ် “စာပေရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာ”စာမူဖြင့် သုတပဒေသာ(၀ိဇ္ဖာပညာရပ်) ဒုတိယဆု၊ ၂၀၀၅-ခုနှစ်အတွက် “ထင်ပေါ်ကျော်ကြား မြန်မာသတင်းစာဆရာကြီးများ”စာမူဖြင့် စာပဒေသာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့သည်။ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် သတင်းထောက်အမှတ်-၃၇၉ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကြေးမုံသတင်းစာတွင် သတင်းထောက်အမှတ်-၁၆၈ ဖြင့်လည်းကောင်းသတင်းများ ရေးသားလျက်ရှိပြီး ဂျာနယ်အချို့တွင် သတင်းများ ရေးသားလျက်ရှိသည်။
အမည်ရင်းမှာ ဦးသောင်းညွန့်ဖြစ်ပြီး ကလောင်အမည်မှာ သတင်းထောက်သောင်းညွန့်(ဖျာပုံ)ဖြစ်ပါသည်။ နေရပ်လိပ်စာမှာ အမှတ်(၁၀၈)၊ ၁၁-လမ်း၊ ၁၀-ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့နယ် ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းထောက်သောင်းညွန့်(ဖျာပုံ)၏ အမျိုးသမီးများသိမှတ်ဖွယ်ရာ ဥပဒေရေးရာ (ဒုတိယအကြိမ်) ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။
ကျွန်မ ဖျာပုံမြို့ကိုရောက်စဉ် ဆရာဦးသောင်းညွန့်နှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်မကြားဖူးခဲ့သော ဆရာ့ဘ၀တစ်စေ့တစ်စောင်းကိုလည်းမေးကြည့်မိသည်။ ဆရာကလည်း သူ့ဘ၀အတွေ့အကြုံအချို့ကို ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ဆရာ့ဘ၀အကြောင်းလေးကို စာမူလေးရေးပေးပါရန် ဆရာ့ကို မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ ဆရာမှလည်း ရေးပေးပါမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဆရာသည် ယခုလက်ရှိတွင် ဖျာပုံမြို့နယ် စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်တွင် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ နောက်ပိုင်း ဆရာနှင့်ကျွန်မ ပြန်မဆုံဖြစ်သေးပါ။ ဆရာနှင့်ဆုံစဉ် သူ၏ စာပေဗိမာန်စာမူဆုရစာအုပ် ၃-အုပ်ကို ဆရာမှ ကျွန်မကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် ဖျာပုံမြို့ကိုရောက်ခဲ့ပါက ဆရာဦးသောင်းညွန့်နှင့်တွေ့ဆုံပြီး အင်တာဗျူးလုပ်ပြီး ပို့စ်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးပါဦးမည်။
Credit : Posted by Waing ,MMSY
This entry was posted in Untags and tagged Post. Bookmark the permalink.
← 62 – ပါမောက္ခချူပ် ဦးကာ
64 – နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းပညာရှင်ပီကင်းပြန် ဦးဘသိန်း →
One thought on “63 – ဦးသောင်းညွန့် (သတင်းထောက်သောင်းညွန့်-ဖျာပုံ)”
What are the Panthays?
A part of Panthay Muslim History – 1
မိသားစုဝင် ၃၀ ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ပေါက်တောမြို့က ဒေါ်နူရ်ဘီရှုနာ
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်က အကြမ်းဖက်မှု လက်မခံဟု ထုတ်ပြန်
Rohingya villages under attack in Arakan
မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ ရပ်တန့်စေရန် အီရန်နိုင်ငံက အဆိုပြုချက် (၃)ရပ် တင်သွင်း
“ဘာသာရေးပဋိပက္ခပြဿနာတွေဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်သလဲ”
မိတ္တီလာမြို့ရှိ မုစ်လင်မ် သင်္ချိုင်းအား တစ်ပတ်အတွင်း ဖယ်ပေးရန် ဖိအားပေးလျက်ရှိ
အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခ များအား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံမှ သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁)
Panthay Muslim: တရုတ်ပန်းသေး မွတ်ဆလင် သမိုင်း အကျဉ်း
who is Rohingya ? ရိုဟင်ဂျာဘယ်သူလဲ?
US Congress extends Myanmar import ban despite reform
Killing Muslim in Arakan ,Burma,Myanmar Video News
killed muslim arakan , burma,myanmar Video News
killing Muslims in Burma’s Rakhine State (News Report in URDU on MessageTV).flv ….
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ‘ဗမာမွတ်စလင်’ကွန်ဖရင့် တွင်ပြောကြားခဲ့သည့် သဘာပတိ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏မိန့်ခွန်း…..
Asean conference on Rohingya crisis
စစ်တွေမြို့ ရဲနွယ်စု ဗလီအား ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့မှ ပြင်ဆင်ပေး လျက်ရှိ ….
1947 Constitution Act,Burma
Photo News In Arakan,Burma
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ ဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်ထားခြင်းခံရသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်း
ပသီစာဆို ( ရွှေတောင်သာဂသူဘွဲ့ခံ ဆရာကြီးဦးနု)
Photo News In Arakan
UNCONFIRMED report/complaint letter I got about Muslim deaths and damaged masjids in Sittwe ONE town
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး Website ထုတ်လွှင့်မည်
Rohingyas from Akyab stranded in Nafe River ( Photo News)
Ethnic violence in Myanmar seems ‘neverending’
မောင်းတောတွင် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
ဩစတြေးလျနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးMr.Bob carrက ရိုဟင်ဂျာအပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် ဆွေးနွေး
အမျိုးသားဖွံ့ ဖြိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ( N.D.P.D) ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောမြို့၏အခြေအနေ (Breaking News)(Updated)
အစိုးရပိုင်သတင်းစာများရဲ့ ချိုးနှိမ်တဲ့၊ ခွဲခြားတဲ့ ၊ စော်ကားတဲ့ အသုံးအနှုန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် သတ်ဖြတ်ကျူးလွန်မှုများ လက်မခံဟု ကြံ့ခိုင်ရေး ပြော
ယခင်လပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month May 2013 (15) March 2013 (1) August 2012 (5) July 2012 (15) June 2012 (27) May 2012 (32) April 2012 (14) March 2012 (4) February 2012 (5) January 2012 (38) December 2011 (17) November 2011 (2) October 2011 (4)
Categories Select Category Articles (34) Biography (3) General (2) History (33) Interviews (1) konwledge (7) Laws (3) Link (3) News (48) Panthay (6) Pathi (34) Photos (11) Rohingya (6) Untags (27)